လူကာကူ ယမျးပုံမီးကဒြေါသူပုနျထရအောငျ အီဘရာဟီမိုဗဈ ဘာပွောခဲ့လဲ? – Play Maker Sports Journal
လူကာကူ ယမျးပုံမီးကဒြေါသူပုနျထရအောငျ အီဘရာဟီမိုဗဈ ဘာပွောခဲ့လဲ?
January 27, 2021 playmaker Sports News 0
မနျယူတိုကျစဈမှူးဟောငျးနှဈဦးတို့ဟာခေါငျးခငျြးဆိုငျတိုကျကာအပွနျအလှနျဆဲဆိုမှုမြားပွုခဲ့ကွပါတယျ။လူကာကူဟာဆှီဒငျတိုကျစဈမှူးရဲ့ပွောကွားမှုအပျေါအကွီးအကယျြဒေါသထှကျကာပထမပိုငျးအပွီးဥမငျလှိုဏျခေါငျးအတှငျး သို့ဝငျခြိနျမှာလညျးရနျမူရနျကွိုးပမျးခဲ့ပါတယျ။လူကာကူဟာအီဘရာဟီမိုဗဈရဲ့ပွောဆိုမှုကိုဒေါသထှကျပွီး “ခှေးမသား။မငျးကိုရောမငျးမိနျးမရောxxxကှာ”လို့ပွောတဲ့အထိဒေါသပုံထခဲ့ပါတယျ။
လူကာကူတဈယောကျဘာကွောငျ့အီဘရာဟီမိုဗဈကိုအကွီးအကယျြဒေါသထှကျခဲ့ရလဲ။အီဘရာဟီမိုဗဈကလူကာကူကို “သောကျရေးမပါတဲ့မှျောကိစ်စဘဲသှားလုပျပါကှာမွညျးလေး”လို့ ပွောကွားခဲ့လို့ ဒေါသထှကျခဲ့တာပါ။
ဟုတျပါတယျ။ရှငျးပါမယျ။လူကာကူဟာ၂၀၁၇ခုနှဈနှရောသီတုနျးကအဲဗာတနျရဲ့တဈပတျလုပျခပေါငျ၁၄၀၀၀၀နဲ့ ကမျးလှမျးမှုကိုပယျခခြဲ့ပါတယျ။အဲဗာတနျကလညျးလူကာကူကိုစာခြုပျသဈခြုပျဆိုရေးအစှမျးကုနျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လူကာကူကကမျးလှမျးမှုကိုပယျခပြွီးအသငျးဟောငျးခြဲလျဆီးသို့ဘဲပွောငျးမယျလို့ဆိုခဲ့ပါတယျ။ဘာကွောငျ့ခြဲလျဆီးသို့ပွောငျးမယျလို့ပွောရလဲဆိုတော့အာဖရိကမှမှျောဆရာကခြဲလျဆီးသို့ပွောငျးမှသာကံကောငျးခွငျးတှေ ကွုံမယျလို့ပွောထားလို့ပါ။လူကာကူရဲ့မိခငျကမှျောဆရာဆီမှာနတျမေးပွီးလူကာကူဘယျအသငျးသို့ပွောငျးသငျ့တယျဆိုတာအကွံဉာဏျရယူခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။အထကျပါသတငျးကိုဖှငျ့ခခြဲ့တာကတော့အဲဗာတနျအသငျးပိုငျရှငျမိုရှီရီကိုယျတိုငျဘဲ ဖွဈပါတယျ။
လူကာကူ ယမ်းပုံမီးကျဒေါသူပုန်ထရအောင် အီဘရာဟီမိုဗစ် ဘာပြောခဲ့လဲ?
မန်ယူတိုက်စစ်မှူးဟောင်းနှစ်ဦးတို့ဟာခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ကာအပြန်အလှန်ဆဲဆိုမှုများပြုခဲ့ကြပါတယ်။လူကာကူဟာဆွီဒင်တိုက်စစ်မှူးရဲ့ပြောကြားမှုအပေါ်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကာပထမပိုင်းအပြီးဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းအတွင်း သို့ဝင်ချိန်မှာလည်းရန်မူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။လူကာကူဟာအီဘရာဟီမိုဗစ်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုဒေါသထွက်ပြီး “ခွေးမသား။မင်းကိုရောမင်းမိန်းမရောxxxကွာ”လို့ပြောတဲ့အထိဒေါသပုံထခဲ့ပါတယ်။
လူကာကူတစ်ယောက်ဘာကြောင့်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ခဲ့ရလဲ။အီဘရာဟီမိုဗစ်ကလူကာကူကို “သောက်ရေးမပါတဲ့မှော်ကိစ္စဘဲသွားလုပ်ပါကွာမြည်းလေး”လို့ ပြောကြားခဲ့လို့ ဒေါသထွက်ခဲ့တာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ရှင်းပါမယ်။လူကာကူဟာ၂၀၁၇ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကအဲဗာတန်ရဲ့တစ်ပတ်လုပ်ခပေါင်၁၄၀၀၀၀နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဗာတန်ကလည်းလူကာကူကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုရေးအစွမ်းကုန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူကာကူကကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချပြီးအသင်းဟောင်းချဲလ်ဆီးသို့ဘဲပြောင်းမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ချဲလ်ဆီးသို့ပြောင်းမယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့အာဖရိကမှမှော်ဆရာကချဲလ်ဆီးသို့ပြောင်းမှသာကံကောင်းခြင်းတွေ ကြုံမယ်လို့ပြောထားလို့ပါ။လူကာကူရဲ့မိခင်ကမှော်ဆရာဆီမှာနတ်မေးပြီးလူကာကူဘယ်အသင်းသို့ပြောင်းသင့်တယ်ဆိုတာအကြံဉာဏ်ရယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါသတင်းကိုဖွင့်ချခဲ့တာကတော့အဲဗာတန်အသင်းပိုင်ရှင်မိုရှီရီကိုယ်တိုင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၄ခုနှဈအထိစာခြုပျဖွငျ့ ပါပူးဂိုမကျဇျကို ဆီဗီလာချေါယူ